Esaltazione della Santa Croce, festa del giorno per il 14 settembre | Ilblogdellapreghiera
Mbuli nke Holy Cross, oriri nke ụbọchị maka 14 Septemba
Paolo Tescione	Edere ya Septemba 14, 2020 Septemba 14, 2020
Akụkọ banyere mbuli elu nke Cross Cross
Na mbido narị afọ nke anọ, Saint Helena, nne nke eze ukwu Rome Constantine, gara Jerusalem ịchọ ebe nsọ nke ndụ Kraịst. O mebiri Templelọ Nsọ Aphrodite nke narị afọ nke abụọ, nke dịka ọdịnala si wuo n'elu ili nke Onye Nzọpụta, nwa ya nwoke wuru Basilica nke Holy Sepulcher n'ebe ahụ. N’oge a na-egwu ihe, ndị ọrụ hụrụ obe atọ. Akụkọ mgbe ochie gosiri na onye amụrụ onye Jizọs nwụrụ n’elu ya mara mgbe aka ya gwọrọ nwanyị na-anwụ anwụ.
Obe ghọrọ ihe a na-efe mgbe niile. N’emume ọma e mere na Fraịde na Jerusalem na njedebe nke narị afọ nke anọ, dị ka otu onye hụrụ ya si kwuo, ewepụrụ osisi ahụ n’ime arịa ọlaọcha ya ma debe ya n’elu tebụl ya na ihe Paịlet nyere iwu ka e debe n’isi Jizọs: “Mmadụ niile na-agafe otu otu; niile na-ehulata ala na-emetụ obe na ihe odide ahụ, na mbụ ya na ọkpọiso, mgbe ahụ na anya; na, mgbe ha susuru obe ọnụ, ha na-aga n'ihu “.
Ọbụna taa, theka Ọwụwa Anyanwụ Katọlik na Ọtọdọks na-eme emume Mbuli nke Holy Cross na ncheta nke nraranye nke basilica na Septemba. Ememme a banyere kalenda nke ọdịda anyanwụ na narị afọ nke asaa mgbe Emperor Heraclius natara obe n'aka ndị Peasia, bụ ndị wepụrụ ya na 614, 15 afọ tupu mgbe ahụ. Dị ka akụkọ a si kwuo, eze ukwu bu n’obi ibubata obe ya na Jerusalem n’onwe ya, mana ọ nweghị ike ịga n’ihu ruo mgbe ọ yipụrụ uwe eze ya wee bụrụ onye ụkwụ ụkwụ ụkwụ.
Obe bụ taa ihe oyiyi zuru ụwa ọnụ nke okwukwe Ndị Kraịst. Ọtụtụ ọgbọ ndị na-ese ihe agbanwewo ka ọ bụrụ ihe mara mma nke a na-ebu n'ahịrị ma ọ bụ eyi dị ka ọla. N'anya Ndị Kraịst oge mbụ ọ nwere mma. O guzo n'èzí ọtụtụ mgbidi obodo, nke a na-eji naanị ozu ndị na-emebi emebi chọọ ya mma, ka ọ bụrụ ihe iyi egwu nye onye ọ bụla jụrụ ọchịchị Rome, gụnyere ndị Kraịst jụrụ ịchụrụ chi ndị Rom àjà. Ọ bụ ezie na ndị kwere ekwe kwuru banyere obe dịka ngwa nzọpụta, ọ dịkarịrị ka ọ na-apụta na nka Ndị Kraịst belụsọ ma a gbanwere ya dị ka arịlịka ma ọ bụ Chi-Rho ruo mgbe iwu Constantine gasịrị nke nnagide.
← Na post gara aga Gara aga post:Chegharia, taa, n’elu Obe nke Kraist, were oge lee anya n’elu obe
Ọzọ Post → Post ozo:Oziọma taa 14 Septemba 2020 na okwu Pope Francis